Maalinta: Ogast 24, 2018
Gawaarida maxalliga ah iyo kuwa nooca yaryar: Tramhammerka koowaad:
Hogaanka sare ee Duqa Magaalada Bursa Recep Altepe iyo Durmazlar Mashiinnada soo saaray tramvayı- silkworm gudaha ugu horeysay Turkiga. Degmada Bursa waxay sanado badan maalgelinaysay nidaamyada tareenka. [More ...]
Trolley Domestic and National: National Panorama li
Durmazlar A.Ş., oo la sameeyay oo la soo saaray ka dib İpekböceği tram, Tram Tram wuxuu u adeegaa sidii 12 X / xaafada Kocaeli iyo 8 ee Dawlada Hoose ee Magaalada. Intaa waxaa u dheer, Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul 30 [More ...]
Trams Local iyo National: Tal Kayseri Talas "
Boqolkiiba 100-hoose ee guriga iyo tan qaran waxay u samaysatay xirmooyin 30 Bozankaya taraam wuxuu ku shaqeeyaa Kayseri. Boqolkiiba taraamyada ay soo saareen injineerada Turkiga ee leh naqshada gudaha ee 100 waa 60 gudaha. [More ...]
National iyo National TC Trambüslerimiz
Baahida loo qabo kaabayaasha nidaamka tareenka ee leh awooda rakaabka sare iyada oo ay ugu wacan tahay jirkeeda nidaamka tareenka, kaas oo awoodooda ka hela nidaamka tuubada tuubada korantada ku laalaada wadada, kaas oo lagu xukumo nidaamka baytariyada meelaha aan lahayn khadka korontada. [More ...]
Diyarbakir Boulevard iyo Streets
Si looga dhigo wadooyinka magaalada iyo wadooyinka inay nadiif ka ahaadaan, Diyarbakır Dowlada Hoose ee Magaalada waxay bilaabey howlo nadaafadeed Wadada Yaşar Kemal Street (Ekinciler), oo shaqadan bilowdey Ciidul Adxaa ka hor. Ciidul Adxaa ka hor Ciidul Adxaa, magaaladu nadiif bay ahayd [More ...]
Kormeerka goob-joogga ah ee Madaxweynayaasha ilaa Wadada Wadooyinka
Duqa Magaalada Alaşehir Ali Uçak iyo Madaxa Dhismaha iyo Dayactirka Wadooyinka Magaalada Manisa ee Magaalada Fevzi Demir, kahor howsha kulul ee loo yaqaan 'asphalt kulul' ayaa la qorsheeyay in lagu sameeyo wadada hore ee İzmir ee Alaşehir, [More ...]
Baabuurta Korontada ee Derindere
Gawaarida gawaarida ee DMA, Derindere, oo ay aasaastay Özkan Derindere iyo Önder Yol ee 2007, waxay qabaneysay howlaheedii iyadoo fulineysay daraasado ballaaran oo R & D sanado badan ah isla markaana natiijada natiijada daraasaddan u beddeleysa. Gaarigiisa koowaad waa [More ...]
Maanta taariikhda: 24 August August 1938 Tareenka Boosaaso
Maanta taariikhda 24 August August 1938 Tareen ayaa yimid Kemah.